YEAR 2017 (161) 2016 (262) 2015 (10) (1) Month
July (20) June (24) May (30) April (19) March (20) February (28) January (20) Beeraha iyo Xoolaha QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga so kala diray magaalooyinka Kismaayo, Jowhar iyo Laascaanood. Waxaa so ojeedinaysa Weris Maxmaed....
21 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Waxaan qiimaha xoolaha ee maanta ku eegaynaa sayladda degmada Burtinle ee gobolka Nugaal. Waxaana inoo soo diray weriyaheena Garoowe Cadiraxmaan Maxamed Xaaji. Waxaa soo jeedinaysa Waris Maxame...
20 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo aan ku soo qaadanay qaar ka mid ah suuqyada Soomaaliya. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
18 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee sayladda Buulo - burde oo uu noo soo diray weriyaheena gobolka Hiiraan Jamaal Cali ayaan ku soo qaadanaynaa wararka qiimaha xoolaha ee maanta. Waxaana soo jeedinaysa Waris Maxamed...
17 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee sayladda Borame ee gobolka Awdal, waxaa soo diray Cabdala Cali Yusuf. Waxaana soo jeedinaysa Waris Maxamed....
15 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha o laga soo kala diray magaalooyinka Laascaanood iyo Jowhar. Waxaa soo jeedinaya Maxamed ...
14 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha maanta waxaan ku eegayna sayladaha Gaalkacayo iyo Wisil oo gobolka Mudug ah iyo Garoowe oo gobolka Nugaal ah. Waxaa soo kala diray Jibriil Cismaan iyo Cabdiraxmaan Maxamed. Waxaana ino...
13 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray suuqa degmada Salagle ee gobolka Jubada dhexe. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
12 JUL 2017 Akhri
Hargeysa: Sicir bararka oo saamayn ku yeeshay danyarta Halkan ka dhegeyso warbixin ku saabsan sicir barar ka jira magaalada Hargeysa oo saamayn ku yeeshay dadka dan yarta ah. sicir bararka waxa asababay lacagta shilinka Soomaaliland oo hoos u dhacay iyo d...
11 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo qayb ka ha baahinta Radio Ergo maalin walba marka laga reebo maalinta axadda. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee sayladda Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaan maanta ku eegaynaa wararkeena qiimaha xoolaha, waxaana soo diray Jamaal Caliyare. Waxaana soo jeedinaysa Waris Maxamed....
10 JUL 2017 Akhri
Beeralayda Jawhar oo kula dagaalamaya cayayaanka beeraha farsamooyin aan ahayn sun Beeraleyda ku nool degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bilaabay hab cusub oo ay beerahooda uga badbaadinayaan cayayaanka gala dalagyada Sisinta, Galeeyda, Digirta, Yaanyo iyo qudaarta kal...
09 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee sayladda Boorame ayaan maanta ku eegaynaa qiimaha xoolaha ee Raadiyaha Ergo. Waxaana inoo soo diray Cabdale Cali Yuusuf. Waxaana soo jeedinaysa Waris Maxamed...
08 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray suuqyada magaalooyinka Jawhar iyo Laascaanood. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
07 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee sayladaha Gaalkacayo iyo Wisil oo gobolka Mudug ah iyo Garoowe oo gobolka Nugaal ah, waxa soo kala diray Jibriil Cismaan iyo Cabdiraxmaan Maxamed. Waxaa soo jeedinaysa Waris Maxamed...
06 JUL 2017 Akhri
Dhul loo ooday daaqsinka oo ay ka faa'ideysanayaan xoolo-dhaqatada Bari (ERGO) - Xoolo-dhaqato gaaraya 2,500 oo qoys ayaa toddobaadkan isugu tegay dooxada Dharoor ee gobolka Bari si ay uga faa’ideystaan dhul-daaqsimeed oodnaa xilligii gu’ga oo hadda loo f...
Qiimaha xoolaha ee seyladda Saakoow Iibka xoolaha ayay dad badan oo Soomaaliyeed noloshooda ku tiirsan tahay. Xubinta qiimaha xoolaha oo maalin kasta aan ku soo qaadanno qaar ka tirsan magaalooyinka dalka ayaan maanta ku eegeynaa seylad...
05 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Waxaan maanta ku eegaynaa sayladda Buuloburde ee gobolka Hiiraan,intay qiimaha xoolaha ka marayaan, waxaana inoo soo diray weriyaheena Beledweyne Jamaal Cali Yare. Waxaana soo jeedinaysa Waris Maxamed...
03 JUL 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha maanta intay ka marayaan saylada Boorame ee gobolka Awdal waxaa inoo soo diray Cabdala Cali Yuusuf. Waxaana soo jeedinaysa Waris Maxamed....
01 JUL 2017 Akhri